चुनाव खारेजी अभियानबाट देश क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको छ : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, महासचिव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७४, २१ पुस शुक्रबार ०७:४७ December 29, 2020 1364 Views
»» प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव त भएरै छाड्यो नि ? कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?
»» तपाईंहरूको पार्टीले यो चुनाव अस्वीकार गरेको थियो । खारेज नै गर्ने निर्णय पनि गर्नुभएको थियो तर….!
»» चुनाव खारेज अभियानमा सयौँ नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार भए । पार्टी पोलिट्ब्युरो सदस्यसमेत समातिनुभयो । यसबारेमा के सोच्नुभएको छ ?
हो उनीहरूले यो चुनाव बन्दुकको नालमा राखेर गरे । यद्यपि सेना र प्रहरीलाई पनि चुनावमा खतरा मोल्न खासै रुची लागेको थिएन । चुनाव सफल गर्न भनेर प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले हाम्रा सयौँजना कमरेडहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने, मुद्दा चलाउने र दमन गर्ने कार्य गर्‍यो । कैयौँ गाउँमा घेरा हाल्ने र खोजतलास गर्ने कार्य भयो । यसो त जनताको सत्ताले पनि केही खराब तत्वहरूलाई गिरफ्तार ग¥यो । यसमा हामीलाई खासै चिन्ता छैन । क्रान्ति, क्रान्तिकारी शक्ति र जनतालाई दमन गर्नु प्रतिक्रियावादी, दलाल, संसद्वादी, पुँजीवादी, साम्राज्यवादीहरूको चरित्र नै हो । यद्यपि उनीहरूले संसद्वादभित्र विरोध गर्ने स्वतन्त्रताको कुरा केवल पुँजीवादी हितका लागि चलाइने बकबास मात्र हो भन्ने सहज बोध यसले गराउँछ । हामी क्रान्तिकारीहरूको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको दलाल पुँजीवादी राज्यलाई क्रान्तिद्वारा परास्त गर्ने र राज्यलाई वैज्ञानिक समाजवादमा पुर्‍याउने हो । हामीले त्यही गर्नुपर्छ ।
»» चुनाव बिथोल्ने क्रममा देशभर बम विस्फोटका घटना भए तर तपाईंहरूले बेलैमा जिम्मा लिनुभएन र त्यसले अन्योल निम्त्यायो भन्ने टिप्पणी छ नि ?
»» चुनावमा भएका विस्फोटका घटनमा तपाईंहरूको पार्टी र सीके राउतहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेरेको पाइयो । यथार्थ के हो ?
»» चुनावका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विशेषगरी ईयूले गरेको टिप्पणीबारे केही प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ कि ?
»» चुनाव खारेजपछि तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ? आगामी कार्यक्रम त केही सार्वजनिक गर्नुभएको छैन नि ?
»» चुनावमै पनि व्यक्तिकेन्द्रित, उम्मेदवार लक्षित आक्रमण गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ त तपाईंहरूमाथि ?
»» एमाले–माके मिलेर निर्माण गरेको वाम गठबन्धनका बारेमा तपाईंहरूको दृष्टिकोण के हो ? यसले तपाईंहरूको आन्दोलनमा केही प्रभाव त पार्दैन ? उनीहरू पार्टीएकता गर्ने, स्थिर सरकार बनाउने, देशको विकास गर्ने कुरा गरिरहेका छन् त !
संशोधनवाद, संसद्वाद र आत्मसमर्पणवादले दुनियाँमा कहिल्यै पनि वैज्ञानिक समाजवाद ल्याएको इतिहास छैन र हुने पनि छैन । संसद् र पुँजीवादी संस्थाभित्रबाट भाषण र प्रचार गरेर कहिल्यै पनि वैज्ञानिक समाजवाद पैदा हुनेछैन । संशोधनवादको कोख समाजवादी कोख होइन, त्यो पुँजीवादी कोख हो जहाँबाट वैज्ञानिक समाजवादलाई निषेध गर्ने जण्ड पुँजीवादको जन्म हुन्छ । केपीले समाजवाद जन्माउन खोजेर के हुन्थ्यो ? केपीको कोखमा पुँजीवादको गर्भ छ, त्यही जन्मिन्छ । प्रचण्डको त त्यो पनि छैन ।
»» वाम गठबन्धनले चुनावकै बाटोबाट समाजवाद स्थापना गर्ने तहसम्म जाने बताइरहेको अवस्थामा समाजवाद स्थापना गर्न अवैधानिक कार्यक्रम र बाटो नै रोज्नुपर्ने बाध्यता के प¥यो तपाईंहरूलाई ?
»» तपाईंहरूले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा, मालेमामा विकास र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाबारे, तपाईंहरूको कार्यक्रमबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी र आलोचनासमेत भइरहेको छ नि ? कसरी फस्र्याउनुहुन्छ ती विषय ?
»» एकीकृत जनक्रान्तिसञ्चालन गर्दा अन्य कम्युनिस्ट पार्टी र मित्र शक्तिहरूलाई कसरी सहकार्यमा राख्नुहुन्छ ?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । अन्य कम्युनिस्ट पार्टी र मित्र शक्तिहरूलाई सहकार्यमा राख्ने हाम्रा तीनवटा प्रस्ट नीतिहरू छन् र ती नीतिलाई हामी लागू गरेर जान्छौँ ।
पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीसँग क्रान्तिमा अगाडि बढ्न चाहने कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकता गरेर जाने, दोस्रो, तत्काल एकता हुन नसके पनि राष्ट्रियता र जनअधिकारका पक्षमा विषय मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्ने, तेस्रो, देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको राज्यसत्ता र राजनीतिक अग्रगमनका लागि राजनीतिक मोर्चामा संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर जाने । कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई यथास्थिति र अग्रगमनका पक्षमा व्यापक धु्रवीकरण गर्ने हाम्रो सोचाइ छ । यसका पक्षमा विभिन्न नेता र शक्तिहरूसँग छलफल चली पनि रहेको छ । नेपालमा एकपटक सोचेको भन्दा नयाँ र उच्च स्तरमा नयाँ राजनीतिक धु्रवीकरण र सङ्घर्ष हुन्छ भन्ने अवस्था देखा पर्दैछ ।
»» तपाईंहरूक्रान्ति गर्दा अब नेपाली सेनाले दलालहरूका विरुद्ध हामीलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्छ, के त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ र ?
»» विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पछिल्लो अवस्था र तपाईंहरूको कम्युनिस्ट भाइचाराका बारेमा सङ्क्षेपमा केही राखिदिनुस् न !
»» प्यालेस्टिन–इजरायल तनाव र जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी स्वीकार्ने अमेरिकी निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
»» अमेरिकाले जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तरकोरिया) सँग निःसर्त वार्ताको प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ आएको छ । के अमेरिका गल्दै गएको हो कोरियासँग ?
विषय ठिकै भन्नुभयो तर उत्तरकोरियासँग अमेरिका गलिसक्यो पनि नभनौँ । कुरा के सत्य हो भने प्रतिरोध, स्वाधीनता र प्रगतिसहितको आत्मरक्षा भन्ने दृष्टिकोण नै पुँजीवादसँगको प्रतिस्पर्धामा वैज्ञानिक र वस्तुवादी दृष्टिकोण हो । उत्तरकोरिया यसैको नमुना हो । जहाँ प्रतिरोध र स्वाभिमान छ त्यहाँ मात्र रक्षा र उन्नति सम्भव छ । जहाँ आत्मसमर्पण र दलालीगिरी हुन्छ त्यसको पतन र विनाश अनिवार्य छ । उत्तरकोरियाले पुँजीवादलाई परास्त गर्दैनथ्यो र वैज्ञानिक समाजवादी मार्ग पकड्दैनथ्यो भने, कोरियाले अमेरिकाविरुद्ध प्रतिरोधको बाटो लिँदैनथ्यो भने उत्तरकोरियाको हालत पूर्वी जर्मनीकै जस्तो हुन्थ्यो । तर उत्तरकोरियाले सही बाटो लिएपछि अमेरिका पछि हट्न बाध्य भएको छ । अमेरिकाले निःसर्त वार्ताको प्रस्ताव गरेको कुरा हामीले पनि पायौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि वार्ता गर्ने भन्यो । यसभित्र अमेरिकाका अनेकौँ दाउ भए पनि उत्तरकोरिया र उत्तरकोरियाली जनताको एक तहको विजय हो । यसले उत्तरकोरियालाई मिच्न वा हमला गर्न सजिलो छैन भन्ने प्रस्ट सन्देश गएको छ । यसो त यो उत्तरकोरियाको मात्र विषय नभएर विश्व जनमतको अभिव्यक्ति पनि हो ।
»» अरु केही ?
नेपालको पेचिलो तर क्रान्तिको सम्भावनायुक्त समयमा हाम्रो दृष्टिकोण राख्ने मौका दिएकोमा रातो—खबरलाई धेरै धेरै धन्यवाद । स्रोत: रातो खबर साप्ताहिक, वर्ष ३, अङ्क २९, पूर्णाङ्क १२४
२०७४ पुस २१ दिउँसो १ः३२ मा प्रकाशित
नजुट्दै फुटको चक्रब्यूहमा एमाले
माओवादी केन्द्रमा समानुपातिकको किचलो